မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၈၄ ခုနှစ်အတွက် (၁) နှစ်စာ ဗေဒင်ဟောစာတမ်း - Barnyar Barnyar
April 15, 2022 linn htet Astrology 0
မဟာသင်္ကြန် ကျချိန် – မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၃၈၃ -ခုနှစ်)၊ နှောင်းတန်ခူးလ္ဆန်း (၁၄)ရက်၊ ခရစ်နှစ် ၂၀၂၂ ဧပြီလ (၁၄)ရက်၊ ကြာသပတေးနေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် (၁၁) နာရီ (၅၉) မိနစ် (၃၀) စက္ကန့် အချိန်တွင် မဟာသင်္ကြန်ကျသည်။
သင်္ကြန်အကြတ်နေ့ – မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၃၈၃-ခုနှစ်) နှောင်းတစ်ခုလ္ဆန်း (၁၅) ရက်၊ ခရစ်နှစ် ၂၀၂၂ ဧပြီလ (၁၅) ရက် သောကြာနေ့။
သင်္ကြန်အတက်နေ့ – မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၃၈၃-ခုနှစ်) နှောင်းတစ်ခူးလပြည့်ကျော် (၁) ရက် ၊ ခရစ်နှစ် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဧပြီလ (၁၆) ရက် စနေနေ့ ညနေစက် (၄) နာရီ (၄) မိနစ် (၁၃) စက္ကန့် အချိန်တွင် မဟာသင်္ကြန် တက်ပါသည်။
မြန်မာ နှစ်ဆန်း (၁) ရက်နေ့ – မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၈၄-ခုနှစ်၊ ဦးတန်ခူး လပြည့်ကျော် (၂) ရက် ၊ ခရစ်နှစ် (၂၀၂၂) ခုနှစ် ဧပြီလ (၁၇) ရက် ၊ တနင်္ဂနွေနေ့။ (စနေသားသမီးများ တာစားသည်)
ပုပ္ပါးစောရဟန်းမင်းကို အကြောင်းပြုပြီးရေးထိုးသော မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၈၄ ခုနှစ်, သခင်ခရစ်တော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးရေးထိုးသော ခရစ်သက္ကရာဇ် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၇ ရက်နေ့မှ ၊ ၂၀၂၃ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၇ ရက်နေ့အတွင်း
စိတ်ကူးအကြံအစည် ရည်ရွယ်ချက်များကို စွန့်စွန့်စားစား ကြိုးစားဆောင်ရွက်လျှင် အောင်မြင်လတ္တံ့။
ငွေရေးကြေးရေး – ငွေတွေဝင်နေပြီး အကြွေးတင်နေအံ့။ အချစ်ရေး – ဆုပ်လည်းစူး စားလည်းရူး အခြေအနေများကြုံရအံ့။
အိမ်ထောင်ရေး – အကောင်းအဆိုး ရောထွေးနေလတ္တံ့။ စိတ်ပူစရာများ စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်စရာများ ကြည်နူးရင်ခုန်စရာများ ရောထွေးနေအံ့။
ပညာရေး – ပညာရေးကံ အလယ်အလတ်သာရှိအံ့။ မိမိရည်မှန်းထားသလောက်သာ အောင်မြင်အံ့။
ကျန်းမာရေး – နား ၊နှာခေါင်း ၊ ဒူး ၊ ကိုယ်ပူခြင်း ၊ ဖျားခြင်း နှင့် ပက်သက်သောရောဂါ ဝေဒနာများ သတိထားသင့်။(တပ်အပ်ဖြစ်မည်ဟု မဆိုလိုပါ ။ သတိထားရန်ဖြစ်သည်)
ယတြာ။ ။ မည့်သည့်နေ့တွင်မဆို သစ်သီး (၆) လုံး ၊ သောက်တော်ရေ (၅)ခွက် ၊ ဖယောင်းတိုင် (၅) တိုင်ကို မိမိနေအိမ်ဘုရားတွင် လှူဒါန်း ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် တစ်နှစ်တာလုံး အခိုက်အညံ့များ ကင်းစင်ကြေပျောက်ပြီး အကြံအစည်များ အောင်မြင်လတ္တံ့။
စီးပွားတက်အံ့။ ဘဝတစ်ဆင့်ချိုး ပြောင်းလဲ မြင့်တက်သွားအံ့။ နာမည်ဂုဏ်သတင်း ကျောဇောထင်ရှားအံ့။
ငွေရေကြေးရေး – နေရာမျိုးစုံက ပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့် ငွေအဝင် ကြမ်းနေအံ့။
အချစ်ရေး – မိမိထက် အဆင့်အတန်းမြင့်မားသူ ချမ်းသာသူများနှင့် ဖူးစာဆုံ လတ္တံ့။
အိမ်ထောင်ရေး – အိမ်ထောင်ဖက်၏ ဂရုစိုက်ခြင်း၊ အလိုလိုက်ခြင်း၊ ကောင်းကျိုးပြုခြင်းကို ခံရလတ္တံ့။
ပညာရေး – ပညာရေးကံ တအားကောင်းနေအံ့။ ဆရာကောင်း သမားကောင်းများထံမှ အကူအညီကောင်း အကြံကောင်း ဉာဏ်ကောင်းများရအံ့။
ကျန်းမာရေး – သွေးသား ၊ သွေးချို ၊ သွား နှင့် ပက်သက်သောရောဂါ ဝေဒနာများ သတိထားသင့်။ဆေးရုံ ဆေးခန်းနှင့် ပက်သက်ရတတ်။ (တပ်အပ်ဖြစ်မည်ဟု မဆိုလိုပါ ။ သတိထားရန် ဖြစ်သည်)
ယတြာ။ ။ မည့်သည့်နေ့တွင်မဆို နှင်းဆီ(၇) ပွင့် ၊ နွားနို့ (၁) ခွက် ကို မိမိနေအိမ်ဘုရားတွင် လှူဒါန်းဆုတောင်းခြင်းဖြင့် တစ်နှစ်တာလုံး အခိုက်အညံ့များ ကင်းစင်ကြေပျောက်ပြီး အကြံအစည်များအောင်မြင်လတ္တံ့။
စီးပွား အရှိန်အဟုန်ဖြင့် တိုးချဲ့သင့်။ လုပ်ငန်းစီးပွား လက်ရှိအခြေအနေထက် များစွားမြင့်တက်လတ္တံ့။ လုပ်ငန်းသစ်များ စတင်သင့်။
ငွေရေးကြေးရေး – လွဲချော်ပြီးမှ အောင်မြင်အံ့ ။ ရမလိုလိုဖြစ်နေတဲ့ ငွေကြေးများ ကြန့်ကြာနေပြီး ၊ မရဘူးဟု ထင်ရသော ငွေကြေးများ ပြန်လည်ရရှိအံ့။
အချစ်ရေး – ချစ်သူ၏ မာယာပရိယာယ်ကြားမှာ နစ်မျောသွားတတ်။ သတိပြုသင့်။ ကောင်းမလိုလိုနဲ့ ညံ့သွားတတ်။ ညံ့မလိုလိုနဲ့ ကောင်းသွားတတ်။
အိမ်ထောင်ရေး – အမြင်တွေအယူအဆတွေ မကြာခဏကွဲလွဲအံ့။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအားနည်းပြီး ဖုံးကွယ်ဟန်ဆောင်မှုတွေ များနေအံ့။
ပညာရေး – မိမိရည်မှန်းထားသည်ထက် ပိုမိုအောင်မြင်လတ္တံ့။
ကျန်းမာရေး – ဝမ်းဗိုက် ၊အဖုအပိန့် ၊ မျက်လုံး နှင့် ပက်သက်သောရောဂါ ဝေဒနာများ သတိထားသင့်။(တပ်အပ်ဖြစ်မည်ဟု မဆိုလိုပါ ။ သတိထားရန်ဖြစ်သည်)
ယတြာ။ ။ မည်သည့်နေ့တွင်မဆို နှင်းဆီ (၇) ပွင့် သောက်တော်ရေ (၄) ခွက် ဖယောင်းတိုင် (၄) တိုင် ၊ ကို မိမိနေအိမ်ဘုရားတွင် မကြာခဏလှူဒါန်း ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် တစ်နှစ်တာလုံး အခိုက်အညံ့များ ကင်းစင်ကြေပျောက်ပြီး အကြံအစည်များ အောင်မြင်လတ္တံ့။
လုပ်သမျှ ကြံသမျှ အောင်မြင် ထမြောက်လတ္တံ့။ အကြံအစည် ရည်ရွယ်ချက်များကို မြန်ြမန်ဆန်ဆန် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သင့်အံ့။ စီးပွားလုပ်ငန်းများကို အင်နှင့်အားနှင့် တိုးချဲ့သင့်အံ့။
ငွေရေးကြေးရေး – မိမိရည်မှန်းထားသလောက် အောင်မြင်အံ့ ။ စိတ်ပူပြီးမှ အောင်မြင်အံ့ ။
အချစ်ရေး – အချစ်စစ် အချစ်မှန် ဖူးစာမှန်များနှင့် ဆုံတွေ့ရလတ္တံ့။ မိမိကိုတန်ဖိုးထား ဂရုစိုက်သော ချစ်သူနှင့်ဆုံတွေ့ရအံ့။
အိမ်ထောင်ရေး – အိမ်ထောင်ဖက်၏ အကျိုးပြုခြင်းကို ရရှိအံ့။ စိတ်တူကိုယ်တူဖြင့် ကြည်ဖြူနေအံ့။
ပညာရေး – မိမိရည်မှန်းထားသည်ထက် ပိုမိုအောင်မြင်လတ္တံ့။ နည်းနည်းကြိုးစားယုံမျှဖြင့် များများအောင်မြင်လတ္တံ့။ ဆရာကောင်း သမားကောင်းတွေ့အံ့။
ကျန်းမာရေး – ဝမ်းဗိုက် ၊ လေ ၊ လည်ပင်း ၊ ရင်ဂေါင်း ၊ လက် ၊ ရေချိုးမှားခြင်း နှင့် ပက်သက်သောရောဂါ ဝေဒနာများ သတိထားသင့်။ (တပ်အပ်ဖြစ်မည်ဟု မဆိုလိုပါ ။ သတိထားရန်ဖြစ်သည်)
ယတြာ။ ။ မည်သည့်နေ့တွင်မဆို ကိတ်မုန့်(၂) ချပ် ၊ ကော်ဖီ (၂) ခွက် ၊ ပန်းအဖြူ (၂) ပွင့် ကို မိမိနေအိမ်ဘုရားတွင် မကြာခဏ လှူဒါန်း ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် တစ်နှစ်တာလုံး အခိုက်အညံ့များ ကင်းစင်ကြေပျောက်ပြီး အကြံအစည်များ အောင်မြင်လတ္တံ့။
ကံတရား၏ မျက်နှာသာပေးခြင်း ၊ အကူအညီ အပံ့အပိုးပေးခြင်းကို မခံရပဲ ၊ မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ် ကိုယ်ပိုင်ဟန် ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းအစများဖြင့် ကြီးပွားတိုးတက် အောင်မြင်ချမ်းသာမည့်နှစ်ဖြစ်အံ့။
ငွေရေးကြေးရေး – ငွေကြေးကိစ္စများ စိတ်ပူ ထစ်ငေါ့ပြီးမှ အောင်မြင်အံ့။ ငွေရင်းနှီးရသောအလုပ်များ သတိထားပြီးလုပ်ပါ။
အချစ်ရေး – ယခင်ကထက် တအားလည်းကောင်းလာနိုင်သလို တအားလည်းဆိုးသွားတတ်။ သတိထားသင့်။
အိမ်ထောင်ရေး – ရန်ဖြစ်လိုက် ပြန်ချစ်လိုက် ဖြစ်နေလတ္တံ့။ မကြာခဏ အိပ်ယာခွဲအိပ်ပေးပါ။
ပညာရေး – ကံတရား၏ အကူအညီပေးခြင်း ၊ နှောက်ယှက်ခြင်းကို မခံရပဲ မိမိရည်မှန်းထားသလောက် အောင်မြင်လတ္တံ့။
ကျန်းမာရေး – ဆီး ၊ သွေး ၊ အစာမှား ၊ ဆေးမှား နှင့် ပက်သက်သောရောဂါ ဝေဒနာများ သတိထားသင့်။ (တပ်အပ်ဖြစ်မည်ဟု မဆိုလိုပါ ။ သတိထားရန်ဖြစ်သည်)
အထူးလိုက်နာရန် … ကောင်းသော အပြောင်းအလဲများဖြစ်ရန် ဘာသာရေးပိုလုပ်သင့်၊ မေတ္တာစိတ်မွေးသင့်၊ မကြာခဏအိပ်ယာပြောင်းအိပ်သင့်။ ခရီးခဏခဏထွက်သင့်။
အခက်အခဲကြီးကြီးမားမားများ ကြုံတွေ့ရပါလျှင် …. ကြာသပတေးနေ့ည ဝတ်အိပ်ထားသော အဝတ်ဟောင်းတစ်စုံကို နောက်နေ့မနက်စော လမ်းတွင် သွားစွန့်ပါ။ (ငါ့မှာရှိနေတဲ့ မကောင်းတဲ့ အခိုက်အညံ့တွေအားလုံး ပါသွားပါစေလို့ ဆုတောင်းပါ) (၂)လတစ်ခါ လုပ်ပါ။ အရေးအကြောင်းကိစ္စပေါ်လျှင် ထပ်လုပ်ပါ။
ယတြာ။ ။မည့်သည့်နေ့တွင်မဆို ကြာဇံကြော် (၂) ပွဲ ၊ ပန်းအဖြူ (၂) ပွင့် ၊ ဖယောင်း (၂) တိုင် နေအိမ်ဘုရားတွင် လှူဒါန်း ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် တစ်နှစ်တာလုံး အခိုက်အညံ့များ ကင်းစင်ကြေပျောက်ပြီး အကြံအစည်များအောင်မြင်လတ္တံ့။
အတိုက်အခံ အခက်အခဲများကြားမှ အကြံအစည် ရည်ရွယ်ချက်များ အောင်မြင်လတ္တံ့။ အပေါင်းအသင်းမှားတတ်။ စိတ်လိုက်မာန်ပါ ပြောဆိုလုပ်ကိုင် ဆုံးဖြတ်တာတွေ သတိပြုပါ။
အထူးလိုက်နာရန်။ ။ ဘာသာရေးများများပိုလုပ်ပါ။ မေတ္တာများများပို့ပါ။ သည်းခံစိတ်မွေးပါ။ စိတ်လိုက်မာန်ပါ တဇွတ်ထိုး ပြောဆိုလုပ်ကိုင် ဆုံးဖြတ်တာတွေကို ရှောင်ကျဉ်ပါ။
ငွေရေးကြေးရေး – ငွေကြေး အခက်အခဲအကြပ်အတည်းများမှ လွတ်မြောက်ဖို့ ၊ ငွေကြေးအကြံအစည်များအောင်မြင်ဖို့ အခြေအနေကောင်း အခွင့်အလမ်းကောင်း ၊ အဆက်အသွယ်ကောင်းများ ၊ အကူအညီကောင်းများပေါ်လာအံ့။
အချစ်ရေး – အချစ်ရေးကံကောင်းနေသော်လည်း ချစ်သူ၏ဟန်ဆောင် လိမ်ညာ ဖုံးကွယ်ခြင်းကို ခံရတတ်တဲ့အတွက်လည်း သတိထားသင့်။
အိမ်ထောင်ရေး – မိမိအိမ်ထောင်ဖက်၏ အထင်မြင်လွဲမှားခြင်းကို ခံရတတ်။ ဖုံးကွယ်ဟန်ဆောင်မှုများ ရောထွေးနေအံ့ ။
ပညာရေး – မိမိရည်မှန်းထားသည်ထက် ပိုမိုအောင်မြင်အံ့။ ပညာရေးနှင့် ပက်သက်ပြီး အကူအညီကောင်း အဆက်အသွယ်ကောင်းများ အကြံကောင်း ဉာဏ်ကောင်းများရအံ့။
ကျန်းမာရေး – ခြေထောက် ၊ ခါး ၊ အာရုံကြော ၊ ကျီးပေါင်း နှင့် ပက်သက်သောရောဂါ ဝေဒနာများ သတိထားသင့်။ (တပ်အပ်ဖြစ်မည်ဟု မဆိုလိုပါ ။ သတိထားရန်ဖြစ်သည်)
ယတြာ။ ။မည့်သည့်နေ့တွင်မဆို မနက် လက်ဖက်ရည် (၄) ခွက် ၊ ယို (၄) မျိုး ၊ ဖယောင်းတိုင် (၄) တိုင် ကို မိမိနေအိမ်ဘုရားတွင် လှူဒါန်း ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် တစ်နှစ်တာလုံး အခိုက်အညံ့များ ကင်းစင်ကြေပျောက်ပြီး အကြံအစည်များ အောင်မြင်လတ္တံ့။
အထူးယတြာ။ ။ သောကြာနေ့ညဝတ်အိပ်ထားသော အဝတ်ဟောင်းတစ်စုံကို နောက်နေ့မနက်စော လမ်းတွင်သွားစွန့်ပါ။ (ငါ့မှာရှိနေတဲ့ မကောင်းတဲ့ အခိုက်အညံ့တွေအားလုံး ပါသွားပါစေလို့ ဆုတောင်းပါ) (၂)လတစ်ခါ လုပ်ပါ။ အကြောင်းကိစ္စပေါ်လျှင် ကံမကောင်းဘူးထင်ရင် ထပ်လုပ်ပါ။
ဘဝတစ်ဆစ်ချိုးပြောင်းလဲမြင့်တက်လတ္တံ့။ အတိတ်ကံကိုအကြောင်းပြုပြီး ငွေအစုလိုက်အပုံလိုက်ရခြင်း၊ ထီဆုကြီးပေါက်ခြင်း၊ ခြံ၊ ကား၊ ကျောက် ကောင်းသောဝင်ခြင်းတွင် ရှိလတ္တံ့။
ငွေရေးကြေးရေး – အတိတ်ကံကို အကြောင်းပြု၍ ငွေကြေးအစုလိုက်အပုံလိုက်ရအံ့။ ငွေကြေးကိစ္စများ မိမိရည်မှန်းထားတာထက် ပိုမိုအောင်မြင်အံ့။
အချစ်ရေး – အပျိုလူပျိုများ အတိတ်ဘဝက ဆုတောင်းရှိခဲ့ဖူးသော အချစ်ဟောင်း အဆက်ဟောင်းများနှင့် ပြန်လည်ဆုံတွေ့ရလတ္တံ့။ စိတ်ပူစရာ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာများ ရောထွေးနေအံ့။
အိမ်ထောင်ရေး – တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး နားလည်မှု မျှဝေခံစားမှုများဖြင့် သာယာနေအံ့။ မယ်တစ်ထမ်း မောင်တစ်ရွက်ဖြင့် ရှေ့သွားနောက်လိုက်ညီနေအံ့။ စိတ်ပူစရာအချို့ ရောနေအံ့။
ပညာရေး – ပညာရေးကံ တအားကောင်းနေအံ့။ ထူးထူးချွန်ချွန် အောင်မြင်အံ့။ နည်းနည်ူးကြိုးစားလိုက်ယုံနှင့် များများအောင်မြင်လတ္တံ့။
ကျန်းမာရေး – ဦးခေါင်း ၊ အာရုံကြော ၊ အဆုတ် ၊ အစာအိမ် နှင့် ပက်သက်သောရောဂါ ဝေဒနာများ သတိထားသင့်။ (တပ်အပ်ဖြစ်မည်ဟု မဆိုလိုပါ ။ သတိထားရန်ဖြစ်သည်)
ယတြာ။ ။ မည့်သည့်နေ့တွင်မဆို ပေါင်မုန့် (၅) ချပ် ၊ ပန်းအဝါ (၅) ပွင့် ၊ ဖေယာင်းတိုင် (၅) တိုင် မိမိနေအိမ်ဘုရားတွင် လှူဒါန်းဆုတောင်းခြင်းဖြင့် တစ်နှစ်တာလုံး အခိုက်အညံ့များ ကင်းစင်ကြေပျောက်ပြီး အကြံအစည်များ အောင်မြင်လတ္တံ့။
( အထူးအားဖြင့် – အတာစားသောနေ့သည် စနေနေ့ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် စနေသားသမီးများသည် သင်္ကြန်အတက်နေ့တွင် … မြတ်စွာဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနှင့်တကွ ရဟန္တာ အရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အား ပန်းအဝါ (၅) ပွင့် ၊၊ သောက်တော်ရေ (၅)ခွက် ၊ ဖယောင်းတိုင် (၅)တိုင် ပူဇော်လှူဒါန်းပြီး … ။
သင်္ကြန်မင်း (သို့) သိကြားမင်း (သို့) စနေဂြိုဟ်မင်း နှင့်တကွ ၊ နတ်ဒေဝတာများ ၊ မိမိအားစောင့်ရှောက်ကြကုန်သော မိမိနှင့်ပဌန်းဆက်ရှိကြကုန်သော နတ်ပုဂ္ဂုလ်များကို မေတ္တာပို့သဆုတောင်းပါ ….။
၁၃၈၄ ခုနှစ် တစ်နှစ်တာလုံးတွင်လည်း ဘာသာရေးပိုလုပ်ခြင်း ၊ ကောင်းမှုကုသလိုလ်များ ပိုမိုပြုလုပ်ခြင်း ၊ မေတ္တာများများပို့ခြင်း ၊ သည်းခံစိတ်မွေးခြင်း ၊ အစစအရာရာ သတိတရားလက်ကိုင်ထားပြီး ဖြတ်သန်းခြင်းအားဖြင့် …
စနေသားသမီးများသည် ၁၃၈၄ ခုနှစ်တစ်နှစ်တာလုံးတွင် အန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်း ၊ အခိုက်အညံ့ကင်းရှင်း ၊ ရောဂါဘယကင်းရှင်းပြီး ကောင်းကျိုးချမ်းသာများ ရရှိခံစားရကာ ကောင်းသော အပြောင်းအလဲများသည် ဧကံမုချဖြစ်လတ္တံ့။)
အကျွန်ုပ်၏ကောင်းသောဟောချက်များ သွေးထွက်အောင်မှန်ကန်၍ ၊ မကောင်းသောဟောချက်များ တက်တက်စင်အောင် လွဲမှားပါစေသတည်း။ …. ။
Hony . Doctor of (Ph.D) Astrology . India (2019)
၁၃၈၃ နှစ်ဟောင်းကုန်၍ ၁၃၈၄ နှစ်သစ်ကိုကြိုလင့်သော ရွက်ဟောင်းတွေကြွေ ရွက်သစ်တွေဝေနေသော နွေရာသီ မြန်မာနှစ်သစ်ကူးအခါသမယ မဟာသင်္ကြန်ကာလ၏ စိတ်လှုပ်ရှား ရင်ခုန်ဖွယ်ကောင်းလှသော
ဆရာ မင်းသိမ်းခိုင် (ရွှေရမ်းထူးလင်း ) ၏ နေ့စဉ်ဗေဒင်ဟောစာတမ်းများကို နားဆင်လိုပါက တယ်လီနောဖုန်းနံပါတ် (၃၀၄၃) ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုပါ ( တစ်ပတ်လျှက် ၃၁၅ ကျပ် ၊ ဉာဏ်ပူဇော်ခပါပြီး )
လူတစ်ယောက်အတွက် နာမည်ဟာ အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ် …။ မူလမွေးဖွားဇာတာဟာ ဘယ်လောက်ပဲညံ့နေပါစေ … ဆိုးနေပါစေ … နာမည်ကြောင့် ဘဝတစ်ခုလုံးအတွက် အညွန့်တလူလူတက်ပြီး ကြီးပွားတိုးတက် အောင်မြင်ချမ်းသာနေတာတွေ ဒုနဲ့ဒေး ရှိသလို …
မူလမွေးဖွားဇာတာဟာ ဘယ်လောက်ပဲ ကောင်းနေပါစေ … နာမည်လေးတစ်လုံးကြောင့် အောင်မြင်သင့်သလောက် မအောင်မြင်ရတာတွေလည်း ဒု နဲ့ ဒေး အများကြီးရှိပါတယ် …။
ဒါကြောင့် ကျနော့်မိတ်ဆွေများရဲ့ ရင်သွေးငယ်များအတွက် အန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်း ရောဂါဘယကင်းရှင်း ဘုန်းကံကြီးမားပြီး မုချ ကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်ချမ်းသာစေမယ့် ကလေးအမည်များကို နာမည်ပေးနည်းမှန်ကန်စွာနဲ့ နည်းစနစ်ကျကျ မှန်မှန်ကန်ကန် …
မိတ်ဆွေတို့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ စိတ်တိုင်းကျ ရွေးချယ်နိုင်အောင် ကလေးအမည်ပေးနည်းများကို အောက်ဖော်ပြပါလင့်မှာ တစ်စုတစ်စည်းတည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ …။ https:// www. facebook .com/permalink.php? story_fbid=4106152129472849&id= 437492979672134
( ဆရာ မင်းသိမ်းခိုင် ကိုယ်တိုင် ရွေးပေးတဲ့နာမည်ကိုမှ လိုချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူများကတော့ မက်ဆင်ဂျာကနေ ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ် )
ရွှေရမ်းထူးလင်း ဓါတ်ခန်း ကို အမှတ် (၂၁) မင်းလမ်း ၊ ဒုတိယထပ် ၊ ဂွတ္တလစ် ၊ ဗဟန်း ၊ ရန်ကုန် သို့ ပြောင်းရွှေ့ထားပါသည်။ ဧည့်တွေ့ချိန် – နေ့စဉ် နေ့လည် (၁၂) နာရီမှ ညနေ (၄) နာရီအတွင်း ။ ဖုန်း ၀၉ ၅၁၀ ၅၄၃၇ #credit
၁၃၈၄ ခု မြန်မာနှစ်ဆန်း ၁ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခု ဧပြီလ ၁၇ ရက်တွင် ခေါင်းဆေးမင်္ဂလာ ပြုလိုသော မိတ်ဆွေများအတွက်ပါ…..